သားသမီးများ၏လူမှုအပြုအမူ | ပညာရေးကလေးများ
ကောင်းသောအမူအကျင့် - ပညာရေးအတွက်အရေးပါသောပြဿနာဖြစ်ဆက်လက်?
ကလေးများနှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု၏လူမှုရေးအပြုအမူကိုခိုင်ခံ့စေ - ရန်ဒီနေရာကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာလဲ?
လူမှုအရည်အချင်းကိုကလေးများပထမဦးဆုံးလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်မယ့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမထို့ကြောင့်အပြုသဘောဆောင်သောလူမှုရေးအပြုအမူနှင့်ဝယ်လိုအားသိရှိစေရန်လူမှုရေးနှင့်ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်း, ကမ်ဘာပျေါတှငျလူမှုရေးဖြစ်လျက်ရှိအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သားသမီးများ၏လူမှုအပြုအမူဟာမိဘများနှင့်သားသမီးများ၏လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်စရာ, တွန်း, bully? သားသမီးရဲ့လူမှုရေးအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်လုပ်နည်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်လူမှုရေးနှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, သို့သော်, နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူတို့မသာဖြစ်ကြသည့်ဥပဒေများနှင့်အတူဒါပေမယ့်လည်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တန်ဖိုးများကိုအပေါ်လိုက်နာကြောင်းလူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်မျှော်လင့်ရသည်။
ဒါကြောင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင့်ကလေးကိုသင်ပေးဖို့မိဘတစ်ဦးအဖြစ်သင်တို့အဘို့အရေးပါသောပညာရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း, သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောဒီတာဝန်အတွက်မူလတန်းကျောင်းနှင့်ကျောင်းများအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများကထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။
မွေးကင်းစနှင့်ကလေးငယ်များကနဦးကိုယ်တိုင်သာအပေါ် fixed နေကြသည်။ သူတို့ကထိန်းချုပ်ထားနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို reset မနိုင်မောင်းတုံ့ပြန်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေကလေးဆန်သော egocentrism ၏ဟောပြောလော့။
ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကအဘို့, ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာကိုယ်နှိုက်ကိုဗဟိုပြု။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ကလေးကရိုးရှင်းစွာသေးအခြားသူများရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအသိအမှတ်မပြုရန်နှင့်အညီပြုမူဖို့သင်ယူမထားပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးဆက်များကိုထင်ဟပ်လို့မရပါဘူး။ ကဆံပင်များကအခြားခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့သည့်အခါထို့ကြောင့်မည်သည့်ဒုစရိုက်ဖြေတစ်ခုနှစ်ခုနှစ်အရွယ်ကလေးကပါသေးမကြာခဏသတိမထားမိသည်။ ဒါဟာသေးပါက, အရှင်သည်သူ၏ကစားဖက်နာကျင်မှု inflicts နားလည်လို့မရပါဘူး။ ယင်းကိုယ်ကျင့်တရားသဘောအရတစ်ဦးကယုံကြည်ချက်ကြောင့်, ဒီအသက်အရွယ်မှာမဟုတ်ဘူးရှိပါတယ်။
ပိုဆိုးတာကရန်, ဘာသာစကားသေးအပြန်အလှန်၏အရေးကြီးဆုံးလူမှုရေး medium အဖြစ်လုံလောက်ဖွံ့ဖြိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို။ ပညာရေး, အခြားကလေးများနှင့်သူ၏လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုကိုချဲ့ထွင်ရန်သင့်ကလေးကိုကူညီလူကြီးများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အတွက်တိုးတက်သောသိမြင်မှု, စိတျပိုငျးဆိုငျရာနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအတွေ့အကြုံများကို။
ဒါကြောင့်သင့်ကလေးကိုအခြားကလေးများနှင့်အတူအစောပိုင်းအဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာ, ပြဇာတ်အဖွဲ့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်အချို့မိသားစုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပုံမှန်သွားပါ။ သင့်ကလေးများအတွက်သင်ယူအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြီးနှင့်သင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအခြားမိဘများနှင့်အတူစကားပြောဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်လူမှုရေးအပြုအမူများမြှင့်တင်ရေးမှကြွလာသောအခါတောင်မှပျိုးခင်းနှင့်မူလတန်းကျောင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ ဒါကြောင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံနှင့်တစ်ချိန်ကမိမိတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဘေးဖယ်ထားနှင့်အပြုသဘောနဲ့ပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်သင်ယူဘယ်မှာသင့်ကလေး။ ထို့ကြောင့်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းပုံမှန်သင့်ကလေးကိုဆောင် ခဲ့. နှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်အိမ်မှာ thumping နေဖြင့်လူမှုရေးသဟဇာတဖြစ်မှုကိုခိုငျခံ့အတွက်ပညာရေးကူညီပံ့ပိုး။
Courtesy နှင့်ကောင်းမွန်သောအမူအကျင့်ရှိသမျှတို့ကိုမှာအရေးအပါဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာပန်းတိုင်အစောပိုင်းကသားစဉ်မြေးဆက်အဘို့အခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤတန်ဖိုးများကို up to date ဖြစ်နေတုန်းပဲရှိပါသလဲ ဟုတ်ပါတယ်, သားသမီးများ၏အပြုသဘောဆောင်သောလူမှုရေးအပြုအမူအစဉ်အဆက်ထက် ပို. အရေးကြီးပါသည်။
အမှန်မှာယဉ်ကျေးတဲ့ရဲ့ရိုသေလေးစားမှုကိုအခြားဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုစကားရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လူတိုင်းကိုကိုယ်နှိုက် courteously လက်ခံရရှိခံရဖို့လိုသည်။ ဒါကြောင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူမှကြွလာသောအခါထိုကွောငျ့, ကောင်းသောအမူအကျင့်နေဆဲဆက်ဆက်ပြဿနာဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျကောင်းသောအပြုအမူကိုတန်ဖိုးထားပါလျှင်, ဒါကြောင့်သင့်ကလေးအစအဦးမှဤနမူနာယူသင့်ပါတယ်။ ကလေးများပထမဦးဆုံးသူတို့၏မိဘများ, သူတို့အပြုအမူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ oriented နေကြသည်။ "ဟုအဆိုပါမော်ဒယ်လ်အပေါ်သင်ယူခြင်း" ဟုအဆိုပါပညာရေးဗန်းစကားအတွက်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို "ကျေးဇူးပြုပြီး" ကိုသင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ယဉ်ကျေးပုံစံများကိုအသုံးပြုအဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှကကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပါရန် "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ။ ဒါဟာပြီးတော့ယဉ်ကျေးများနှင့်ဖော်ရွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သည်အဘယ်ကြောင့်နောက်ပိုင်း, သငျသညျအစကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အဘယ်သူသည် scandalizes, လူမှုရေးအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာမထားဘူး။ ဖော်ရွေ, သို့သော်, တံခါးကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည် - နှစ်ဦးစလုံးပညာရှင်ပီသစွာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ။
ကလေးများသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ပြုမူခြင်းနှင့်လည်းလူကြီးများမှသင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤပထမဦးဆုံးသူတို့ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်နှစ်လိုဖွယ်မဟုတ်ကြောင်းလူမှုရေးစံအဖြစ်အများအပြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, Internalize အတွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကလေးငယ်များမှာပထမဦးဆုံးဤနည်းဥပဒေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နားလည်ကြသည်မဟုတ် - သူတို့သူမ၏ "သားကောင်" နဲ့စာနာနိုင်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရိုက်နှက်ခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းသဘောပေါက်အထိပါပဲ။
သင့်ရဲ့ကလေးငယ်ဆည်းပူးဖို့ကြိုးစားနေလျှင်ဒီတော့တစ်ကစားစရာအတင်းအားဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်, သင်ချက်ချင်းအခြေအနေကကြားဝင်နှင့်ရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်မိခင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဖခင်ရှိသည်။ အဲဒီမှာစောင့်ဆိုင်းသို့မဟုတ်အခြားကစားစရာလိုအပ်လျက်ရှိသောသင့်ကလေးကိုရှင်းပြပါ။ နောက်ပိုင်း, သငျသညျလိုက်လျောတွေ့ရှိရန်သို့မဟုတ်လူကြီးများထံမှအကူအညီရှာနှုတ်ဖြင့်ပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်သင့်ကလေးကိုအားပေးသင့်ပါတယ်။
သငျသညျလူမှုရေးအပြန်အလှန်အဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို set up လျှင်, သင်လည်းဤအဖို့လိုက်နာဖြစ်ကြောင်းသေချာရပေမည်။ သင့်ကလေးဟာသူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုနားလည်ကြပြီးတကယ် internalized ကြောင်းဒါကြောင့်ပင်ပန်းပေမယ့်လိုအပ်လျှင်ပါပဲ။ ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှကြွလာခဲ့လျှင်အခြားကလေးများနှင့်အတူကစားသောအခါ, ဥပမာ, သငျသညျတသမတ်တည်းအောင်မြင်ဖို့ရန်ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်တစ်ခုမှာအတိုင်းအတာသင့်ကလေးကိုခဏမပိုမိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
အရေးကြီးတာက, အခြားရွေးချယ်စရာအကြမ်းမဖက်အပြုအမူတွေကိုကြည့်နှင့်ချီးမွမ်းခြင်းမှတဆင့်ယဉ်ကျေး, လူမှုရေးအပြုအမူအားဖြည့်ရန်သင့်အား directing ။
အတူတူကလေးတွေနဲ့အတူစမ်းသပ်ချက် | ပညာရေး ...
ယုန်၏လူမှုဖူလုံရေး - အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ
သြစတြေးလျ၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ဘယ်လ်ဂျီယံ၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ဒိန်းမတ်၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ဂျာမဏီ၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
အက်စ်တိုးနီးယား၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံ
ဖင်လန်၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ပြင်သစ်နိုင်ငံအလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ဂါဘွန်၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
ဂရိနိုင်ငံရဲ့အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
အင်ဒိုနီးရှား၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ
အိုင်ယာလန်၏အလံ - နိုင်ငံအားလုံး၏အလံများ